Mu’asasad Tansaaniyaan ah oo haweenka ka caawinaysa in ay ganacsi bilaabaan - Sabahionline.com
Mu’asasad Tansaaniyaan ah oo haweenka ka caawinaysa in ay ganacsi bilaabaan
Mu’assasadda Tansaaniya ee Jtegemee Vijana (JVTF) ayaa 20 gabdhood oo dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Caruusha ee waqooyiga Tansaaniya, kuna sugan xaala khatar ah middiiba siiyay 300,000 oo shilin ($193) si ay ugu bilaabaan ganacsi, sidaana waxa Sabtidii (19-ka May) qoray wargayska the Guardian ee kasoo baxa Tansaaniya.
Wasiir Tansaaniyaan ah oo ku baaqay in la maal-gashado waddada tareennada
Baanka Adduunka oo tababbar saboolnimada lagula tacaalo ka bixinaya Tansaaniya
Marwada Koowaad ee Tansaaniya oo ka hadashay heerarka dhimashada hooyada
Gabdhahan, oo qaarkood horay uga ganacsan jireen jirkooda, ayaa lacagtan la siiyay kadib markii ay qaateen tababar la xiriira shaqada iyo hal-abuurka ganacsiga.
“Kadib markii ay qaateen tababarka, mid walba oo ka mida ka qayb-galayaasha waxa ay awood u yeelatay in ay calaamadsato mashruuc ganacsi oo yar, kadibna ay bilaabaan ganacsigooda u gaarka ah,” ayuu yiri Raymond Mashambo, agaasimaha maamulka mu’asasadda JVTF.
Shan bilood ka dib, dumarkan waxa u suura-gali doona in ay iska bixiyaan lacagtii biloowga ahayd ee la siiyay, markaa bacdamaa ay lacagtu tahay mid soo noqonaysa, barnaamijku waa uu sii ballaaran doona si uu u gaaro dumar dheeraad ah. Waxa uu sheegay in haatanba la filayo in ay tababar helaan 20 gabdhood oo kale.
Mashabmo waxa uu sheegay in barnaamijkan tababar uu ku faafi doono meelo kale oo lagu yaqaan ka-ganacsiga jirka, oo ay ka mid yihiin Mto-wa-Mbu, Karatu and Namanga.